Akụkọ - Ịhụnanya ndụ · egwuregwu n'anya
Eprel bụ oge dị mma, ihu igwe doro anya, anwụ na -ekpo ọkụ, ọhịa anọ doro anya, okooko osisi cherry na -ama ifuru, catkins na -efe efe, noodles bụ okooko osisi peach, ụmụ ahụhụ na nnụnụ na -eti mkpu, ikuku na -ada nwayọ ... obughi oyi oyi nke Maachị, obughi oke ọkọchị nke Mee, ihe niile dị otu a Ọ na -eme ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala na obi ụtọ.
Iji kwalite ahụike nke ndị ọrụ, mee ka ndụ ha nwee ohere, hapụ nrụgide ọrụ, kwalite nkwurịta okwu mmetụta uche n'etiti ndị ọrụ, ma melite ịdị n'otu nke ndị ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ na-atụ aro na malite na Eprel 23, hapụ ọrụ nkeji iri abụọ na mbụ n'ehihie Fraịde ọ bụla. hazie ndị ọrụ ka ha na -agba ọsọ kwa izu.
Ogologo ya dị kilomita iri. Ọ bụrụhaala na emezu ebumnuche ahụ, n'agbanyeghị agbanyeghị ọsọ ị na -agba, na -agba ọsọ, ma ọ bụ na -eje ije ọsọ ọsọ; ọrụ ịgba ọsọ kwa izu bụ nke afọ ofufo, enwere ike ịkpọbata ndị ezinụlọ na ndị ikwu; malite na ụlọ ọrụ, boulevards obodo dị nso, ogige, wdg.
Mgbe ịpụsịrị ọrụ, onye ọ bụla yiiri uwe egwuregwu, akpụkpọ ụkwụ egwuregwu, elekere egwuregwu, na mpe mpe akwa ikpere. Ejiri ngwa egwuregwu niile yi uwe nke ọma ma anyị dị njikere ịga.
Onye ọ bụla, ị chụrụ m wee mechaa asọmpi ogologo kilomita iri na ikuku dị mma. Ogige ntụrụndụ dị nso, obodo, ụlọ akwụkwọ na okporo ụzọ Huanhu ahapụla onyinyo na akara ukwu anyị. N'ịbụ ndị anyị kpụrụ, ụmụaka sitere na ezinụlọ na ndị ọrụ ibe sitere na ụlọ ọrụ nwanne wee sonyekwara ndị otu na -agba ọsọ kwa izu.
Mbara ọkụ nke anyanwụ dara na -enwu n'ahụ anyị, anyị na -emegharị ọsụsọ anyị, na -eche ihu anyanwụ ka ọ na -aga n'ihu, ma na -amakụ anyanwụ ka anyị na -agba ọsọ.